Thandwe Airport to Be Upgraded to Host International Flights
The Ministry of Transport and Communications has identified 14 airports out ofatotal of 31 domestic airports to upgrade so as to assist the tourism sector development, and activities are progressing to implement upgrading works of airports in Kawthaung, Heho and Mawlamyine as the first phase of the plan.
လာမည့် စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်တွင် UMFCCI Centennial International Exop 2019 အား Fortune Plaza တွင် ကျင်းပမည်
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက " မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်း/ပြည်နယ်တွေက ဒေသထုတ်ကုန်တွေကို နိုင်ငံတွင်းကနေ ကမ္ဘာသိအောင် ချပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်တွေနဲ့ အတူတကွပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံ့အကျိုးစီးပွားတုိးတက်ဖို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားကြမှာပါ" ဟု ဆိုသည်။
Hilton Myanmar to Create Nearly 600 Jobs for Its Hotels and Resorts Including Times City Yangon
The American hotel chain has created more than 12,000 employments at its hotels and resorts being operated in the Southeast Asian region, according to Mr. Peter Webster, Regional General Manager for Hilton Hotels in Singapore, Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia.
An OTC Market to Be Created for Unlisted Public Companies
The OTC market is required to establish withaminimum number of three securities companies, and the market may come with less safety for share trading because it is notastock market, added U Thaung Han.
FMI Air Seeks Permit to Resume Services; Authorities to Do Scrutiny to Ensure No More Suspension or Retreat
“We will issueapress release soon over the resumption of FMI Air. We could not comment on the matter at present,” said Ma Thiri Yi Mon, an information executive at FMI, to BETV.
ကုလားပဲနှင့် စားတော်ပဲကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းရန်စီစဉ်
ပြည်တွင်း၌ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု နည်းပါးလျက်ရှိသည့် ကုလားပဲနှင့် စားတော်ပဲကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းရန် စီစဉ်လျက်ရှိ ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ဇွန်လ (၂၉)ရက်က ကုန်သည်/စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒုတိယသမ္မတ(၁)နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံ ပွဲ၌ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအပေါ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆက်လက်အကောင်းရှုမြင်
ဘဏ္ဍာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ယခုထက်ပိုမို၍ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရိုးမမဟာဗျူဟာဦးပိုင်လီမိတက်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က ထောက်ပြထားသည်။
ပြည်တွင်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍအတွက် Myanmar Property Awards (၅) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပမည်
“ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ Smart ဖြစ်တဲ့ဆီ၊ ပိုကောင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆီကို သွားနေကြပါတယ်။ ဒါက မြန်မာနိုင်ငံတင်မဟုတ်ပါဘူး တစ်ကမ္ဘာလုံးပါပဲ။ အကယ်၍ ပိုကောင်းတဲ့အဆောက်အဦးတွေ၊ ကွန်ဒိုတွေ၊ ဈေးဝယ်စင်တာတွေ၊ ဟိုတယ်တွေမဆောက်ဘူးဆိုရင်တော့ ကြာလာရင်ပြိုပျက်သွားနိုင်ပါတယ်” ဟု ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ Tony Picon က ပြောသည်။
ကြွပ်ရွနေတဲ့ ရေချိုကျောက်ပုဇွန်တွေကို တစ်ထိုင်တည်း အ၀စားလို့ရတဲ့ နေရာ
တရုတ်ပြည်ကနေ အရှင်လတ်လတ် တိုက်ရိုက်တင်သွင်းလာတဲ့ ကျောက်ပုဇွန်တွေကို တရုတ်ဆေးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ချက်ထားတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို Lobsters fall in love with the fish ဆိုတဲ့ ဆိုင်မှာ ရရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်အ၀င်နည်းချိန် ၀ယ်လိုအားများသဖြင့် ရက် (၉၀)ဆန်တစ်အိတ် ကျပ် (၁၅၀၀)နီးပါး ဈေးတက်
ယခင်က ရက် (၉၀)ဆန်တစ်အိတ် ကျပ် (၂၀၅၀၀) ၀န်းကျင်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ကျပ် (၂၂၀၀၀) နီးပါးအထိ မြင့်တက်သွား ကြောင်း ဆန်စပါးကုန်စည်ဒိုင်(၀ါးတန်း) မှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်က ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက Dump Truck (၃)စီး ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း အပါအ၀င် ယနေ့ တင်ဒါ ထူးခြားသတင်းများ
ပြန်ကြားရေး (၃) ထပ်အဆောက်အအုံ အကြီးစာပြင်ဆင်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအပါအ၀င် အခြားသောတင်ဒါသတင်းများ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်း မူလတန်းဆင့်သင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အားလုံးအတွက် ဗလာ စာအုပ်များ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း အပါအ၀င် ယနေ့တင်ဒါထူးခြားသတင်းများ
ဖလမ်း (ဆူရ်ဘုန်)လေဆိပ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လိုအပ်သော Steel Structure Member များ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း အပါအ၀င် ယနေ့တင်ဒါထူးခြားသတင်းများ
အတ္တရံမြစ်ကူး (စံပယ်ဂူ) တံတား တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ လုပ်ငန်းခွင်အရောက် ၀ယ်ယူခြင်း၊ စက်ယာဉ်ယန္တရားငှားရမ်းခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း အပါအ၀င် ယနေ့တင်ဒါထူးခြား သတင်းများ
ယနေ့ ငွေလဲနှုန်း (၁၉.၉.၂၀၁၉)
ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် (၁၈.၉.၂၀၁၉) ရက်၏ ဈေးနှုန်း ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာလ (၁၈) စတော့ဈေး
ယနေ့ ငွေလဲနှုန်း (၁၈.၉.၂၀၁၉)
ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် (၁၇.၉.၂၀၁၉) ရက်၏ ဈေးနှုန်း ဖြစ်သည်။